Stats YouTube na-egosi ihe kpatara azụmahịa gị enweghị ike ịgbaghara - SoNuker
Ọtụtụ ụdị na azụmaahịa achọpụtalarị mkpa YouTube dị maka ịga nke ọma mkpụmkpụ na ogologo oge. Agbanyeghị, anyị anaghị arịọ gị ka ị were okwu anyị maka ya. Ọnụọgụ anaghị agha ụgha, nke ahụ bụkwa ihe anyị na-ewetara gị taa. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ YouTube 5 ndị ​​a enweghị ike ime ka ị kwenye mkpa YouTube dị, anyị na-enwe obi abụọ ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla ga-eme.
Ijeri mmadụ abụọ na-abanye na YouTube kwa ọnwa
Nke ahụ na-eme ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1/4 nke ndị bi n'ụwa. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ YouTube na-enye ya ihu n'elu nyiwe ndị ọzọ niile. Naanị asọmpi dị nso bụ Facebook, mana nyiwe abụọ a na-arụ ọrụ dị iche iche. Kedu ihe ọ pụtara? Ọ pụtara na ihe ọ bụla niche gị nwere ike ịbụ, ị ga-ahụ ndị mmadụ nwere mmasị na vidiyo gị ma ọ bụrụ na ha nwere ọdịnaya bara uru. Ka a sịkwa ihe mere e nwere ọtụtụ ọwa YouTube na-aga nke ọma na isiokwu ndị na-adịghị mma.
74% nke ndị okenye nọ na United States na-eji YouTube
Enweghị ịgọnarị na United States na-aga n'ihu na-abụ onye ndu zuru ụwa ọnụ na akụ na ụba na ịzụ ahịa. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 75% nke ụmụ amaala US na-eji YouTube, ọ bụ nnukwu ohere maka azụmaahịa si mba ofesi iji lekwasị anya n'ahịa a. United States na-abụkwa otu n'ime mba ndị kasị baa ọgaranya n'ụwa. Maka ọtụtụ obere azụmaahịa dị na mba ụwa nke atọ, ahịa US bụ isi mmalite ha na-enweta ego. A na-atụ anya na pasentị ga-eto karịa n'afọ ndị na-abịa. Ọ bụrụ na ị na-eche mgbe ọ ga-abụ oge kwesịrị ekwesị iji sonyere YouTube, ịgaghị enwe ike ibido ozugbo.
77% nke ndị nọ n'agbata afọ 15 na 25 na-eji YouTube
Ọtụtụ puku afọ bụ ọgbọ kacha mara teknụzụ na-ebi ugbu a, ha ga-achịkwa ọdịnihu. Ihe karịrị 1/3 nke puku afọ puku afọ na-eji YouTube oge niile, ọnụ ọgụgụ ndị a sitere na nyocha 2020. Ọnụ ọgụgụ ahụ abawanyela n'ezie na 2021, ma na-aga n'ihu na 2022. Ịbanye n'ime mmụọ ntorobịa bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji YouTube maka ọganihu azụmahịa. Iji mee nke ahụ nke ọma, ọ nweghị ihe nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma karịa YouTube.
YouTube ghere oghe maka okike, agbụrụ, na mmekọahụ niile
YouTube bụ oghere mepere emepe ebe ndị mmadụ nwere ike ịkparịta ụka n'enweghị nsogbu n'agbasaghị ịkpọasị. Oke mmekọahụ nke ndị ọrụ YouTube na-ekpughe na ọ bụ otu n'ime usoro mgbasa ozi ọha na eze maara. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ nwoke nwere nnochite anya karịa (55%), ndị ọrụ nwanyị anọghị n'azụ (45%). Ọ bụkwa ihe na-adọrọ mmasị ịmara na mgbe United States gachara, India na-enye onyinye kachasị elu na YouTube. Site na mmata ọha na eze na-aghọ isi ihe na onyonyo ika, YouTube bụ ebe kachasị mma iji bulie mmata ika yana gbasaa ozi mmekọrịta dị mma.
Ndị ọrụ toro eto na-eji nkezi nkeji iri anọ na abụọ na YouTube kwa ụbọchị
Ọ bụrụ na nkezi dị elu dị ka nkeji 42, ị nwere ike ịkọ oge ole ndị ọrụ dị arọ na-etinye na YouTube. Ụfọdụ na-eji ọtụtụ awa kwa ụbọchị, ebe ndị ọzọ YouTube bụ isi iyi ntụrụndụ. Maka azụmaahịa, ọ bụ nnukwu ohere ịbanye n'ime oge nlele a wee tinye ya maka uru. Ụlọ ọrụ na-akwụ nnukwu ego maka sekọnd ole na ole nke oge mgbasa ozi. Site na ọwa azụmahịa YouTube ahaziri ahazi, ha nwere ike ịmepụta ọdịnaya nkwado ka mma na-akwụghị ego ahụ na YouTube na/ma ọ bụ ndị na-eme ihe. Ị nwere ike ọbụna zụta awa elekere YouTube iji nweta mmekọ ọnụ karịa. Ọ bụ ya mere nnukwu na obere azụmaahịa na-agbalị ime ka ọnụnọ YouTube ha sie ike.
Stats na-ekpughe eziokwu dị n'azụ hype ahụ. N'ihe banyere YouTube, hype ahụ dị adị ka ọ na-enweta. Ohere iji tinye YouTube maka azụmaahịa enweghị njedebe. Site n'enyemaka nke ndị ọkachamara ịre ahịa YouTube dị ka SoNuker, ị nwekwara ike ime ihe kacha mma YouTube maka ika gị.
Stats YouTube na-egosi ihe kpatara azụmahịa gị enweghị ike ịgbaghara nke ndi dere SoNuker, 13 January 2022
Yabụ, ị mechara dezie vidiyo nkeji 10 maka ọwa YouTube gị. Vidio ahụ nwere ọtụtụ ngalaba dị iche iche na-emetụ aka n'ọtụtụ isiokwu, ị na-echekwa ihe ị ga - eme iji nyere aka
Mara banyere Mgbasa ozi Mgbasa Ozi Ọhụrụ nke YouTube Ebe a
O doro anya na YouTube bụ ịga-n’elu ikpo okwu maka ọtụtụ ndị hụrụ vidiyo. The Google-ekesịpde video n'elu ikpo okwu nwere kwa ọnwa zuru ụwa ọnụ onye ọrụ isi nke 2 ijeri, na-eme ya nanị otu nzọụkwụ n'azụ mmadụ mgbasa ozi…